Dowladda Norway oo Aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya – Somalia
Dowladda Norway oo Aqoonsatay baasaboorka…
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka qeyb galay munaasabad ay dowladda Norway ku shaacisay in ay aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaallada Nairobi ee dalka Kenya. Wafdiga wasiirka waxaa ka mid ahaa Wasiirka Amniga Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Abuukar Isloow, Agaasimaha guud ee hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya Kornayl Maxamed Aadan Koofi iyo sii-hayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya mudane Cali Maxamed Sheekh.
Danjiraha Norway u qaabilsan Kenya iyo Soomaaliya Victor C. Rønneberg ayaa yiri
“Hore waxaan u aqoonsannayn baasaboorka Diblomaasiga ah ee Soomaaliya, Norway waxa ay sidoo kale aqoonsanaysaa baasaboorka caadiga ah iyo kan shaqo ee ay soo saarto Agaasinka Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya. Go’aankani waxa uu dhaqan galayaa bisha Agoosto kowdeeda”.
Dhinaca kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa u mahad celiyay dowladda Norway isaga oo sheegay in Soomaaliya ay soo dhawaynayso tallaabadan.
Category: Faafin, WarsaxaafadeedBy Admin July 13, 2018 Leave a comment
PreviousPrevious post:Economic DiplomacyNextNext post:Soomaalida ku nool Kenya oo u dabaal degtay kowda Luuliyo
Sii-hayaha Safaaradda oo ka qeyb galay munaasabad deeq waxbarasho lagu siinayay arday danyar ah
Sii-Hayaha Safaaradda oo Muslimiinta ugu hambalyeey bisha Ramadan